काठमाडौँ । लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गर्दै आइरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्ड ‘एफवान सफ्ट आइसिटी अवार्ड २०२१’ मा विभिन्न स्टार्टअप, प्रडक्ट तथा इन्नोभेसनहरूको प्रतिस्प्रधा जारी छ । ४० बढी स्टार्टअपहरूबाट विभिन्न ४ चरणको छनौट पश्चात् उत्कृष्ट ५ स्टार्टअपहरू अहिले सर्वोत्कृष्ट क्याटेगोरी विजेताको लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । यसैगरी ३५ बढी प्रडक्टहरूबाट छानिएर उत्कृष्ट ५ प्रडक्ट र ६० बढीबाट छानिएका उत्कृष्ट ५ राइजिङ स्टार इन्नोभेसनहरू विजेताको लागि पब्लिक भोेटिङमा सहभागी भएका छन् ।
यी तीन विधाको विजेताका लागि मंसिर २२ गतेसम्म ई–सेवा र एसएमएसमार्फत पब्लिक भोटिङ सञ्चालनमा रहेको छ । यसैगरी उतकृष्ट १० मा पर्न सफल ३ विधाका प्रतिस्पर्धीको लागि पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्ड विधामा पनि भोटिङ सञ्चालनमा छ । यसैगरी अन्य ८ वटा अवार्ड विधाको लागि विभिन्न चरणका छनौट प्रक्रियाहरू सञ्चालनमा छन् । अवार्डको ग्राण्ड फिनाले पुस २ गते द सोल्टी होटलमा आयोजना हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा रहेका उत्कृष्ट ५ र पब्लिक च्वाइसमा विजेता बनाउनको लागि ई–सेवा र एसएमएस मार्फत भोट गर्न सकिन्छ । भोटिङको लागि विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ictaward.org/vote मा समावेश छ ।
हाउस अफ बुक्स प्रा.लि.
खेती भेन्चर प्रा.लि.
निर्माण साथी टेक्नोभेसन प्रा.लि.
पु¥याउ सर्भिसेज प्रा.लि.
यो परियोजना स्वचालित हावा शुद्धीकरण प्रणालीको लागि इन्टरनेट अफ थिंग्स ९आईओटी० मा आधारित छ । यसमा जडान गरिएको डिस्प्लेमा हावाको गुणस्तर मापन देखाउँछ र प्रदूषण स्वस्थ स्तरभन्दा बढी हुँदा स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यो उपकरण वायुको गुणस्तर स्वस्थ स्तरमा पुगेपछि आफैं बन्द हुने गर्दछ । परियोजनासँग सर्भरमा आधारित डेटाबेस छ, जुन स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरको डेटालाई अनुसन्धान, अध्ययन, सञ्चालन गर्न र प्रभावकारी उपायहरूमा अनुगमन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्यास डिटेक्टरहरू जस्तै अन्य मोड्युलहरू थपेर हानिकारक र रासायनिक ग्यासहरू पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने मानिसहरूलाई सचेत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस प्रोजेक्टमा मनोज गुरुङ, कुशल भण्डारी, श्रीदीप कैनी, नवनीत सिंह र इशान पन्त संलग्न रहेका छन् ।
एफवान सफ्ट आइसिटी अवार्ड २०२१